Na iOS 11 tinogona kupindura nhare otomatiki mushure memasekondi mashoma | IPhone nhau
Zvishoma nezvishoma uye sevagadziri vari kuongorora ins uye kubuda kweIOS 11, muActualidad iPhone isu tiri kukuzivisa iwe nezveumwe neumwe wavo. Yekupedzisira, iyo inogona kubatsira mune dzimwe nguva, inowanikwa mune mukana wekukwanisa kupindura mafoni atinogamuchira otomatiki, pasina kusangana chero nguva nechinhu. Kunyangwe ichi chimiro chakagadzirirwa uye chakanangana nematambudziko nenyaya dzekuwanika, senge zvimwe zvinhu zverudzi urwu, zvinogona kubatsira zvakanyanya zuva nezuva, kunyanya kana tiri kuita rimwe basa rinoda kushandiswa kwemaoko edu sekubika, rimwe basa re DIY, kutyaira ...
Ino haisi nguva yekutanga Apple wedzera basa nyowani kune ramangwana mushanduro yekupedzisira bvisa, asi ini ndingati basa iri harisi pakati pavo, kunyanya nekuda kwekushandisa kwarinotipa. Panguva ino, vese vashandisi vari kuyedza iOS 11 vanogona kutotanga kuita basa iri uye kurishandisa pasina dambudziko.
Maitiro ekuti otomatiki kufona kupindura muIOS 11
Kutanga isu tinokwira kumusoro Zvirongwa - Zvakajairika.
Mukati meGeneral, tinya pane sarudzo Accessibility.
Wobva wadzvanya pa Audio nzira.
Mune inotevera menyu isu tinosarudza Pindura otomatiki uye isu tinoshandisa iyo Pindura otomatiki bhokisi.
Pazasi peiyi sarudzo, isu tinofanirwa kuseta iyo nguva mushure meiyo iPhone yedu ichatora mafoni atinogamuchira, nguva iyo nekumisikidza yakaiswa pamasekonzi matatu.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, tKufona kwese kuchapindurwa otomatiki mushure memasekonzi matatu, kunze kwekunge tazviita nemaoko nguva iyoyo isati yapfuura Kana isu tikamisikidza iri basa, zvakakosha kuti uve newired kana bluetooth headset kuti tikwanise kuteerera nekunzwikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » NaIOS 11 tinogona kupindura nhare otomatiki mushure memasekonzi mashoma
Apple inorasikirwa Taylor Swift seApple Music yakasarudzika